उपत्यकामा आज कति थपिए कोरोना संक्रमित ? – Suchana Hub
उपत्यकामा आज कति थपिए कोरोना संक्रमित ?
2 months ago सुचना हब : संवाददाता
काठमाडौं । दिनहुँ रुपमा संक्रमित थपिने क्रममा आज देशभरमा कुल २ हजार ५ सय ६९ जना नयाँ संक्रमित भेटिएका छन् । तीमध्य काठमाडौं उपत्यकामा मात्र थप १ हजार २ सय ६१ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
नयाँ संक्रमितमध्य काठमाण्डौमा ९ सय ७६ जना, भक्तपुरमा ८१ जना र ललितपुरमा २ सय ४ रहेका छन् । यससँगै काठमाण्डौमा संक्रमितको कुल संख्या ७५ हजार ३ सय १७ पुगेको छ । त्यस्तै भक्तपुरमा ६ हजार ७ सय ३९ र ललितपुरमा कुल १० हजार ६ सय ७५ पुगेको छ ।
Previous संक्रमितको संख्या २ लाख नाघ्यो, आज कति थपिए ?
Next के हुन्छ होला त तिहार र छठ पर्वपछि उपत्यकामा कडा लकडाउन ?